Kedụ ka "Blockchain" ga - esi mee ka anyị nwekwuo onwe anyị? | Site na Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Na Intanet bụ akụkụ dị mkpa na mmepe nke mmepe mmadụ bụ ihe doro anya, agbanyeghị maka ụmụ mmadụ nkịtị ọ naghị adị mfe nghọta ma ọ bụ mara ihe mgbanwe a pụtara na ndụ anyị.
Na mmalite ya ka ekpughere "netwọk" dị ka a Ohere inweta agbasa oziN'aka ozo, onye obula no na uwa nke nwere intaneti puru iru ozi puru iche site na ighota uzo. Na mgbakwunye na nke a, onye ọ bụla kwuru nwere ike ịmeghachi ozi ahụ ugboro ole ọ chọrọ. A na-akpọ nke a Internet nke Ozi.
Ozu ihe omuma a nke Intanet nyere ka o nye a nnwere onwe ka ukwuu nye ndị mmadụ gburugburu ụwa, priori, echiche dị oke ma zuru oke. Agbanyeghị, ọdịdị nke ya na-ahụ maka ịgbagha uru ndị e kere ya maka ya. Na nkọwa ya, isntanetị bụ netwọkụ kọmpụta zuru ụwa ọnụ maka ịnyefe ozi. Eziokwu ahụ bụ na ọ dabere na nkwado kọmputa na-amanye anyị ka anyị nwee usoro ogbugba ndu edepụtara na koodu nke na-enye ya ohere ịrụ ọrụ ya. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ iziga ozi, anyị chọrọ usoro nke ndị na-eweta ihe ọmụma ahụ iji dịrị, ọ bụkwa ebe a ka echiche nke nnwere onwe na ịchịkwa ọchịchị gbadara mmiri ahụ.
Koodu nke usoro iwu ndị ae kwuru n'elu ka e mepụtara ha abughi isi mmalite, nke ahụ bụ, onye ọrụ na-enweghị usoro enweghị ike ịnweta koodu ahụ wee gbanwee ya iji mezuo arụmọrụ ụfọdụ dabara adaba maka mkpa ha, ọ bụrụ na ọ bụghị na ha nwere, ma ka nwere, na kwekọọ na Koodu ndị nnukwu ụlọ ọrụ atọ ma ọ bụ anọ na-enye gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ghaghị igwu egwuregwu ahụ ha hapụrụ ya, si otú a na-ewepụ akụkụ dị ukwuu nke nnwere onwe ahụ a na-atụ anya ya ogologo oge.
N'aka nke ọzọ, ndị na-emepụta ọdịnaya na-ejidekwa mkpa ọ dị iji nyiwe nke ọtụtụ mba ndị a iji gosipụta ọrụ ha, ịnakwere ọnọdụ na ụgwọ na ha na-amanye.
Yabụ, ọnọdụ ahụgoro afọ 25 gara aga bụ nke nchịkwa ụgha, Ebe ọ bụ na n’ezie ihe niile na-agagharị na algorithms nke ndị ole na ole kere. Ọ bụrụ na nke a, anyị agbakwunye na amaghị aha, ihe bụ isi nke nnwere onwe, bụ isi na-agaghị ekwe omume site na iji usoro iwu dị ugbu a, anyị na-abịa na nkwubi okwu na Intanet emebeghị ọrụ nke ọma nke ọ chọburu.
N'ịbụ ndị nwere ọnọdụ a, ihe anyị na-ezo aka na ya dị ka nke a n'ihi na amaghi onye obu ma ọ bụ ezigbo njirimara, a na-akpọ Satoshi Nakamoto kpebiri imepụta na njedebe nke afọ iri mbụ nke puku afọ ogbugba ndu Bitcoin, netwọk "ọgbọ na ibe" (netwọk dị n'etiti ndị ọgbọ) nke nyere ohere ịgafe eji oghe emeghe na a ọnụ ọgụgụ nke ọnụ (kọmputa ejikọrọ na a na netwọk) ịkọrọ ọmụma n'etiti ha na-enweghị e nwere ihe organism na-achịkwa kwuru azụmahịa, ya bụ, ebelata. N'otu aka ahụ, ozi ahụ ekekọrịta ga-echekwa na blọgụ jikọtara ọnụ site na ọrụ algorithmic. A mụrụ Blockchain.
Nka na uzu banyere “blockchain”Ga-enye ọtụtụ isiokwu ka anyị wee lekwasị anya n’ihe teknụzụ a nwere ike iwetara anyị.
Na mbu, ekwesiri ighota na ibu teknụzụ dabere na isi mmalite Onye obula nwere ike iwere koodu mbu edere ma gbanwee ma obu mebaa ya dika o masiri ha, wee nweta ngwa ọhụrụ dị iche na nke mbụ. Site na nke a, ihe enwetara bụ na nhazi nke ozi ahụ nwere nnukwu ibu karịa nkwado nke edere ya, ọ bụ ihe anyị na-akpọ Internet bara uru.
Internet bara uru a dị iche na difntanetị nke Ozi ọkachasị na nke ahụ kwuru na ozi a enweghị ike ịgbanweN’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ozugbo a gbakwunyere ya na ngọngọ ahụ, enweghị ike depụta ya ma ọ bụ gbanwee ya ma onye ọ bụla nwere ike ịnweta ya n’enweghị nlekọta nke otu etiti. Ezigbo usoro nchịkwa. A ga-atụkwasịkwara na nke a na adreesị eji mee ihe maka ịnyefe ozi ezoro ezo, nke ichebe njirimara onye ọrụ ahụ dị irè.
Akụkụ ndị a niile dị mma emeela na n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya enweghi ngwụcha nke nyiwe na ụlọ ọrụ amalitela iji wuo ngwaahịa ha n'okpuru nchebe nke ngọngọ, site na ndị raara onwe ha nye inye nkwado maka ịntanetị dị iche iche ọbụna ndị na-ekwe mepụta azụmahịa azụmahịa. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịtụ anya na n'ọdịnihu dị nso, ọrụ ọ bụla anyị na-arụ na kọmputa anyị ga-adabere na sistemụ a ma rụọ ya site na ọrụ nke na-eji ngọngọ ahụ dị ka nkwado, si otú a na-ejigide aha anyị, na-ewepụ ndị na-emechi ibe ya na mmesi obi ike na mmadụ niile ga-amata ọrụ anyị ebe Blockchain dabere na ntụkwasị obi etinyere n’etiti abụọ na-amaghị onwe ha.
Ọ ka bụ teknụzụ incipient chọrọ usoro ntozu oke, mana ọdịnihu bụ nke gị, belụsọ na anyị bụ mmadụ bibiri ya, dịka anyị na-eme ihe ọma niile anyị chọtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Kedụ ka "Blockchain" ga - esi mee ka anyị nwekwuo onwe anyị?
lelee edemede a m dere!
Ọ bụ ego kachasị ọnụ ahịa m nwere ebe ọ bụ na BOINC na-arụ ọrụ nke ọma na ndabere, n'adịghị ka ndị ọzọ dị ka Monero nke zuru oke (na, n'ebumnuche) mebie oghere L3 na-eme mmetụta ọbụlagodi na kọmpụta dị ike buru oke ibu.
Echefuru m isiokwu ahụ, haha.
onye mmeri soto dijo
na maka ihe a niile, nnukwu ụlọ akụ agaghị anakwere cryptocurrencies, »hapụ njikwa mana olee otu?»
Zaghachi onye mmeri soto
Edemede dị ezigbo mma, n’achọghị ichefu ihe egwu dị n’onweghị aha.
Ọ bụ eziokwu na ezoro ezo na enweghị aha na-enye anyị mmetụta nke nchekwa. Butooo, enwere ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche.
Echiche m banyere ile anya na mmetụta nke Libreoffice II